IATA: Rolls-Royce inosimbisa kuzvipira kuvhura aftermarket yakanakisa tsika
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » UK Kuputsa Nhau » IATA: Rolls-Royce inosimbisa kuzvipira kuvhura aftermarket yakanakisa tsika
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • Technology • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Rolls-Royce haisarure nendege, vadiki kana vanopa MRO vanoshandisa zvisiri zveOEM zvikamu kana kugadzirisa.
Rolls-Royce haimiriri kuti ndege kana vashoma vanyorese kumabasa eRoll-Royce.
Rolls-Royce haidziviriri kuvandudzwa kwezvakakodzera zvisiri zveOEM zvikamu kana zvisiri-OEM kugadzirisa nevapi veMRO uye vakazvimiririra vagadziri vezvikamu.
Mutemo weRolls-Royce ndeyekupa ndege, vashoma uye vanopa veMRO kusasarura kuwana zvikamu zveOEM, kugadzirisa uye kutsigira.
The International Mhepo Yekufambisa Sangano (IATA) uye Rolls-Royce plc vakasaina chirevo chakabatanidzwa chinojekesa kuzvipira kunogadzirwa kweinjiniya kune yakavhurika uye yemakwikwi nzira yekugadzirisa, kugadzirisa uye kugadzirisa (MRO) masevhisi.
Gwaro iri rakapedziswa mushure memwedzi yakati wandei yenhaurirano inobudirira uye yekudyidzana pamabhizimusi maitiro akanakisa enjini MRO services.
Masangano ese ari maviri anoenderana pamisimboti mina yakakosha inosimbisa nzira yeRoll-Royce kune MRO ecosystem uye inosanganisirwa muchirevo chepamutemo:
Rolls-Royce haidziviriri kuvandudzwa kwezvakanaka zvisiri zveOEM zvikamu kana zvisiri zveOEM zvigadziriso nevatapi veMRO uye vakazvimiririra vagadziri vezvikamu, sekureba sekunge ivo vachibvumidzwa neanokodzera airworthiness mutongi;
2. Mutemo weRolls-Royce ndeyekupa nendege, vashoma uye vanopa veMRO kusasarura kuwana zvikamu zveOEM, kugadzirisa uye kutsigira (kusanganisira kuwanikwa kweRoll-Royce Care);
3. Rolls-Royce haisarure nendege, vadiki kana vanopa MRO vanoshandisa zvisiri zveOEM zvikamu kana kugadzirisa;
4. Rolls-Royce haizomanikidze kuti ndege kana vashoma vanyore kuRoll-Royce masevhisi.
Pakati peavo vanotarisirwa kubatsirwa ndeve ndege, ndege nevadiki veinjini, nemasangano anoda kupa MRO masevhisi enjini dzeRoll-Royce.